Am-bolana no hiatrehany ny fiofanana, fampianarana amin’ny fiteny anglisy arahin’ny fampiharana avy hatrany aorian’ny teoria. Hiasa avy hatrany any amin’ireo orinasa mpikirakira ny resaka sarimihetsika ao Berlin ihany koa ny tenany. Tafiditra ao anatin’ny fiofanana hatrehin’i Koloina Famenontsoa Rakotoarisoa moa ny famokarana horonan-tsarimihetsika, ny fakana sary ankoatra ny fandrafetana izany hanjary ho sary miaina avy hatrany. Efa sivy taona izao no nisian’ny fiaraha-miasa teo amin’i Madagasikara sy Alemana amin’ny fampiroboroboana ny resaka kolontsaina tahaka izao. Ho an’Atoa Heinz Hermanns, talen’ny interfilm dia nambarany fa vonona hatrany ny tenany hanohana olona manan-talenta tahaka izao isan-taona, hotronin’ireo mpiara-miombon’antoka aminy toy ny minisitera federalin’i Alemana sy ny raharaham-bahiny. Ny mba hahafahan’ireo tanora Malagasy mivelatra sy hahalalany ny fandrosoan’ny filalaovana sary mihetsika any Eoropa sy ny manodidina no tanjona izay marihina fa tena tombony lehibe tokoa.